Corso di birmano > italiano| Numeri | Traduzione
Corso birmano - Numeri
Zero သုည / ၀ - thoN ŋya
Uno တစ် / ၁ - titʔ
Due နှစ် / ၂ - nhit'
Tre သုံး / ၃ - thouN
Quattro လေး / ၄ - léi
Cinque ငါး / ၅ - ŋa
Sei ခြောက် / ၆ - chaukʔ
Sette ခုနှစ် / ၇ - kouN nhit'
Otto ရှစ် / ၈ - chit ?
Nove ကိုး / ၉ - ko
Dieci တစ်ဆယ် / ၁၀ - thit sai
Undici ဆယ့်တစ် / ၁၁ - seʔ titʔ
Dodici ဆယ့်နှစ် / ၁၂ - seʔ nhit'
Tredici ဆယ့်သုံး / ၁၃ - seʔthouN
Quattordici တစ်ဆယ့်လေး / ၁၄ - seʔ léi
Quindici တစ်ဆယ့်ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Sedici တစ်ဆယ့်ခြောက် / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Diciassette တစ်ဆယ့်ခုနှစ် / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Diciotto တစ်ဆယ့်ရှစ် / ၁၈ - seʔ chitʔ
Diciannove ဆယ့်ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Venti နှစ်ဆယ် / ၂၀ - nhit sai
Ventuno နှစ်ဆယ့်တစ် / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Ventidue နှစ်ဆယ့်နှစ် / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Ventitre နှစ်ဆယ့်သုံး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Ventiquattro နှစ်ဆယ့်လေး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Venticinque နှစ်ဆယ့်ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Ventisei နှစ်ဆယ့်ခြောက် / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Ventisette နှစ်ဆယ့်ခုနှစ် / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Ventotto နှစ်ဆယ့်ရှစ် / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Ventinove နှစ်ဆယ့်ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Trenta သုံးဆယ် / ၃၀ - thouN sai
Trentuno သုံးဆယ့်တစ် / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Trentadue သုံးဆယ့်နှစ် / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Trentatre သုံးဆယ့်သုံး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Trentaquattro သုံးဆယ့်လေး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Trentacinque သုံးဆယ့်ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Trentasei သုံးဆယ့်ခြောက် / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Quaranta လေးဆယ် / ၄၀ - léi sai
Cinquanta ငါးဆယ် / ၅၀ - ŋa sai
Sessanta ခြောက်ဆယ် / ၆၀ - chauk sai
Settanta ခုနှစ်ဆယ် / ၇၀ - kouN nhit' sai
Ottanta ရှစ်ဆယ် / ၈၀ - chit ? Sai
Novanta ကိုးဆယ် / ၉၀ - ko sai
Cento တစ်ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Cento-cinque တစ်ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Duecento နှစ်ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Trecento သုံးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Quattrocento လေးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Mille တစ်ထောင် / ၁၀၀၀ - titʔ taung
Millecinquecento တစ်ထောင့်ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Duemila နှစ်ထောင် / ၂၀၀၀ - nhit taung
Diecimila တစ်သောင်း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung